Maantana ma nin ayay i moodeen, gabadh gaadhi lagala degay - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Maantana ma nin ayay i moodeen, gabadh gaadhi lagala degay
Amniga magaalada Muqdisho si kasta oo loo adkeeyo maadaama argagixiso noocyo badan tahay waxa kaliya oo looga hortagi karaa cadow kula hurda waa inaad taxadirtaa intii aad karto waayo waa cadow banaystey dhiigaaga oo minid kasta ku hawlan sidi uu kuu dili lahaa.
Faaisa waa gabadh gaari hindiga bajaajta lagala degay kadib markii askari feejigan uu ka shikiyay, waxana la geeyay saldhig ku yaala magaalada Muqdisho si loo baaro waxa ay tahay iyo halka miay mu socoto.
Waxa loo sheegay inayna naag ahayn, waxayse ku doday jnay naagtahay. Waxa lagu wareejiyay gabdho baara. Gabdhihi ayaa ku yiri ” dharka dhigo haye. Askari iyo gabadh kale waxay taagan yihiin cilaan ayaa u marsan ninkaan.
Ugu dambeyn askari odey ah ayaa soo galay saldhiga oo u sheegay askarta waajibkooda gudanaaya inaan dumar ahay. Faaisa ayaa sheegtay saaka guriga xaajigeyga ayaan ka soo toosay maantana waxa la i leeyahay waxa tahay nin.
Askarta ayaa aad u feejigan waxayna Faaisa ku dhex dhacdey xilli dhaqaaq xun ku gelinaayo xabsi. Hore ayaa loo qabtey argagixiso xiran dharka dumarka ee madow ee dhaqan ahaan nooga yimi Carabta.
Sawirka hoose gabadha ninka la moodey